ပြည်တွင်းသတင်း Archives - Page 238 of 247 - MinSayYar
9th May 2020 Editor
နာမည်ကြီး တုပ်ကွေးဆေးကို အန္တရာယ်ရှိဆေးအဖြစ် မြန်မာပြည် ဆရာဝန်အသင်းသတ်မှတ်
နာမည်ကြီး တုပ်ကွေးဆေးကို အန္တရာယ်ရှိဆေးအဖြစ် မြန်မာပြည် ဆရာဝန်အသင်းသတ်မှတ်… တုပ်ကွေးကာကွယ်တယ်ဆိုပြိး အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Fluarix Tetra 2020 ဆေးကို အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆေးအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်းက သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ Fluariz Tetra 2020 ဆေးရဲ့တန်ဖိုးဟာ မြန်မာငွေ ကျပ်လေးသောင်းဝန်းကျင်ရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း ခေတ်စားနေပါတယ်။ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက စစ်ဆေးခိုင်းထားတဲ့ Fluariz ဆေးဟာ အရောင်အသွေး အာနိသင်အာမခံချက်မရှိတဲ့အပြင် မှားယွင်းသုံးစွဲမိရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ Credit ######################### နာမည်ကြီး တုပ်ကွေးဆေးကို အန္တရာယ်ရှိဆေးအဖြစ် မြန်မာပြည် ဆရာဝန်အသင်းသတ်မှတ်… တုပ်ကွေးကာကွယ်တယ်ဆိုပြိး အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Fluarix Tetra 2020 ဆေးကို အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆေးအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်းက သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ Fluariz Tetra 2020 ဆေးရဲ့တန်ဖိုးဟာ မြန်မာငွေ ကျပ်လေးသောင်းဝန်းကျင်ရှိပြီး […]
အမှိုက်ထဲကနေ ရွှေကိုရအောင် ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မီးအိမ်ရှင်ဆရာဝန်ကြီး
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် အမှိုက်ထဲကနေ ရွှေကိုရအောင် ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မီးအိမ်ရှင်ဆရာဝန်ကြီး ဖုံအလိမ်းလိမ်း ကပ်နေသော သူ့ကို ကျွန်တော် မြင်ရချိန်က စိတ်ထဲတွင် တစ်မျိုးကြီး။ ဒီ ကားကြီးက ဘယ်လို ဖြစ်လို့ ဒီလို ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ ရပ်ထားတာ (၆)နှစ်ရှိပြီဆိုပဲ။ ကျွန်တော် ပြင်ပြီး သုံးရလျှင် ကောင်းမလားဆိုတော့ ဆရာရယ် အင်ဂျင်လည်း မကောင်းတော့ဘူး၊ ဘက်ထရီတွေလည်း မကောင်း၊ တာယာလည်း မကောင်း၊ ဟိုဟာမကောင်း၊ ဒီဟာ မကောင်း မကောင်းဋီကာ စုံလင်စွာ ကြားရပါတော့သည်။ ဝပ်ရှော့ဆရာ ခေါ်ပြကြည့်ဖူးသည်။ သိန်း လေးငါးဆယ် ကုန်မှာဟု ဆိုသဖြင့် ငြိမ်နေရသည် ဆိုပြန်ပါသည်။ ဒီလိုအချိန်မှာပဲ covid က ပေါ်လာသည်။ Covid လူနာတွေ တင်ရန် လူနာတင်ကားတွေ လိုသည်။ လူနာတင်ကား […]
တစ်ရွာလုံးနီးနီးပါပဲ မီးထဲပါသွားတာ ဘာမှကိုမရလိုက်ကြဘူးတဲ့ဗျာ တောရွာလည်းဖြစ် ခုလိုကပ်ရောဂါကြီးကျရောက်နေချိန်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ ပိုဆိုးပေါ့ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ
စစ်ကိုင်းတိုင်း မြင်းမူမြို့နယ် စိုင်းမင်းရွာ တစ်ရွာလုံးနီးနီးပါပဲ မီးထဲပါသွားတာ ဘာမှကိုမရလိုက်ကြဘူးတဲ့ဗျာ တောရွာလည်းဖြစ် ခုလိုကပ်ရောဂါကြီးကျရောက်နေချိန်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ ပိုဆိုးပေါ့ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ 😭😭😭 ကိုယ်ရွာရဲ့ အနောက်ဘက်ကရွာဆိုတော့ ဆရာသမားတွေလည်းရှိ ၊ အမျိုးတွေလည်းရှိ ၊ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတော့ပိုလို့တောင်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ 😭😭😭 ကူညီမဲ့သူများအမြန်ပေါပေါက်ပါစေဗျာ 😭😭😭 အိမ်ခြေ – ၄၅ အိမ် အိမ်ထောင်စု – ၅၂ စု လူဦးရေ – ၁၈၁ ဦး ခုလို ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ Share ပေးခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ယူရအောင်နော် သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး Please 🙏🙏🙏 Credit 8 .5. 2020 ###################### စစ်ကိုင်းတိုင်း မြင်းမူမြို့နယ် စိုင်းမင်းရွာ တစ်ရွာလုံးနီးနီးပါပဲ မီးထဲပါသွားတာ ဘာမှကိုမရလိုက်ကြဘူးတဲ့ဗျာ တောရွာလည်းဖြစ် […]
ဆရာတော်အရှင်ဆေကိန္ဒမှမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသို့ လူနာတင်ယာဉ်Ambulance (၁)စီးလှူဒါန်း
ဆရာတော်အရှင်ဆေကိန္ဒမှမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသို့ လူနာတင်ယာဉ်Ambulance (၁)စီးလှူဒါန်း ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ မှ COVID-19 ကာကွယ် ကုသ ထိန်းချုပ်ရေး အရေးပေါ်ကာလအတွင်းလိုအပ်နေသော လူနာတင်ယာဉ်Ambulance (၁)စီးကို ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး-ကွပ်ကဲရေးရုံးသို့လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ မှ COVID-19 ကာကွယ် ကုသ ထိန်းချုပ်ရေး အရေးပေါ်ကာလအတွင်းလိုအပ်နေသော လူနာတင်ယာဉ်Ambulance (၁)စီးကို ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး-ကွပ်ကဲရေးရုံးသို့လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ မှ COVID-19 ကာကွယ် ကုသ ထိန်းချုပ်ရေး အရေးပေါ်ကာလအတွင်းလိုအပ်နေသော လူနာတင်ယာဉ်Ambulance (၁)စီးကို ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး-ကွပ်ကဲရေးရုံးသို့လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ Credit ################### ဆရာတော်အရှင်ဆေကိန္ဒမှမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသို့ လူနာတင်ယာဉ်Ambulance (၁)စီးလှူဒါန်း ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ မှ COVID-19 ကာကွယ် ကုသ ထိန်းချုပ်ရေး အရေးပေါ်ကာလအတွင်းလိုအပ်နေသော လူနာတင်ယာဉ်Ambulance […]
ရွှေလီမြစ်ထဲကို တောင်သူများ ပြောင်းဖူးတွေ ပစ်ချနေရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ရဲ့ နောက်ကွယ်
မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်မှာ ပြောင်းဖူးသွားရောင်းတဲ့ တောင်သူတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီး တရုတ်နယ်စပ်က ပိတ်လိုက်ထားတာကြောင့် ပြောင်းဖူးတွေရောင်းမရဘဲ နယ်စပ်က ရွှေလီမြစ်ထဲကို ပစ်ချနေရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီ့ပြောင်းဖူးတွေမြစ်ထဲ ပစ်ချနေတဲ့ဆိုတာ မှန်တယ်လို့ မူဆယ်သစ်သီးကုန်စည်ဒိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းမြင့်ဗိုလ်က ဘီဘီစီကို အတည်ပြုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဖရဲသီးတွေ တန်နဲ့ချီပြီး လမ်းဘေးမှာ ပစ်ရတဲ့ နောက်ပိုင်း မေလ ဆန်းကစပြီး ပြောင်းဖူးတွေကို တရုတ်နယ်စပ်မှာ အဝယ်မရှိတာကြောင့် မြန်မာပြည်က တောင်သူတွေဟာ အခုလိုစွန့်ပစ်နေကြတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်း နဲ့ ပန်ဆိုင်း၊ ကြူကုတ်တို့မှာ ပြောင်းဖူးတွေကို ရောင်းမရတာကြောင့် တောင်သူတွေက အလကားပေးနေကြပြီး ပမာဏများလွန်းတာကြောင့် ဘယ်သူမှ မယူနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်နေတယ်လို့ နမ့်ခမ်းမြို့က မြို့မိမြို့ဖ ဦးစိုင်းအောင်ဝင်းက ပြောပါတယ် ။ […]
ရွှေပါရမီ ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက မှ ဦးဆောင်သော ရွှေပါရမီကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်း မှ Covid -19 ဆေး စစ် စက် သိန်း ၄၀၀တန် စက် ၂ လုံးအား ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ မှာယူပြီး မနေ့ညက ရောက်ရှိ လာပါတယ်… ယနေ့ NHL တွင် စစ်ဆေးရာ ၄၅မိနစ် ကို ၁၆ ယောက်စစ်လို့ရပါတယ်… ၁ယောက်ကို ၃သောင်း ဝန်း ကျင်လောက် ကြနိုင်ပြီး… ဆေးစစ် ဌာန တစ်ခုလုံး ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေကြပါသည်… မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိလျှင် ၁၀ လုံး ထိ လှူရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်… မနက်ဖြန် ၁၀နာရီ ၄င်းဌာန တွင် (ရွှေတိဂုံဘုရားအနီးဇီဝက လမ်း ရှိ NHL […]
ချောက်မြို့တွင် အပူချိန် ၄၇ ဒသမ ၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ စံချိန်သစ်တင်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောက်မြို့မှာ ဒီကနေ့ မေလ ၈ ရက်နေ့ အပူချိန် စံချိန်သစ် တင်သွားတယ်လို့ ချောက်မြို့နယ် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒစခန်းက သိရပါတယ်။ ချောက်မြို့မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၉ ရက်က အပူချိန် ၄၇ ဒသမ ၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ အမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့တော့ ၄၇ ဒသမ ၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ စံချိန်အသစ်တင်ခဲ့တာလို့ ချောက်မြို့နယ် မိုးဇလစခန်းက စခန်းမှူးဒေါ်အေးသန္တာအောင်က ပြောပါတယ်။ ခုရက်ပိုင်းမှာ အမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန် ဒသမ 5° C မှ 1.5°C အထိ ဆက်တိုက်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့ မေလ ၈ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီတိုင်းတာချက်အရ 47.5°C အထိ ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ အပူချိန် […]
ယနေ့ မေလ (၈) ရက် ကိုဗစ်လူနာသစ် မတွေ့ရှိ၊ ကုသပျောက်ကင်းသူ (၆၇) ဦးထိရှိလာ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၈-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၈-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ ပထမအသုတ်စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၃) ခု၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၃) ခုနှင့် အမှတ် (၂) တပ်မတော် ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁,၀၀၀) နေပြည်တော်၊ ဓာတ်ခွဲဌာနမှ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၃၃) ခု၊ စုစုပေါင်း (၄၁၉)ခုတွင် – COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် မတွေ့ရှိပါ။၂။ (၈-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ (၁၇၆) ဦးရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ၃။ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများတွင် ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု […]
“ဒီနေ့ လားရှိုးမှာ PPE ၀တ်စုံအပြည့်နဲ့ သဂြိုလ်ခံခဲ့ရတဲ့ လူငယ်လေးရဲ့ မသေခင်မှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်”
လားရှိုးမှာ ဒီမနက်ကွယ်လွန်ပြီး ပရဟိတ အဖွဲ့တွေက PPE ဝတ်စုံတွေနဲ့ သဂြိုလ်ခံခဲ့ရတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးရှိခဲ့ပါတယ်…PPEတွေနဲ့ DBကို သယ်တဲ့ပုံကိုတွေ့ရတော့ မြို့သူမြို့သားတွေ ထိတ်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်…၎င်းကစ္စကို လားရှိုးဆေးရုံက တာဝန်ရှိသူက ခုလိုရှင်းပြပါတယ် “ဒီနေ့ သင်္ဂြိုလ်တဲ့လူနာကမနေ့ကဆေးရုံတက် တယ်.. တီဘီနဲ့ SLE. ( ကိုယ်ခံအား တုန့်ပြန်ရောဂါ) ရှိတယ်ဖျားတာဆိုတော့ ဆေးရုံတင်ထားတာ ဆေးစစ်ချက်တွေမစုံသေးတော့ စောင့်ကြည့်လူနာ ဖြစ်မဖြစ်မဆုံးဖြတ်ရသေးခင်ညကဆုံးသွားလို့ တို့ဖတ်နမူနာယူပြီးပို့ထားတယ်” လို့ပြောပါတယ် သေဆုံးခဲ့တဲ့ လူနာကတော့ သူမသေခင်မှာ ခုလိုရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ် “အဆုံးထိဖတ်ပေးကြပါ#သွေးလေးဖက်နာဖြစ်နေတာ(2)နှစ်လောက်ရှိနေပါပြီ 😔😔😔!!! ကျေးဇူးပြု၍ဒီစာကိုမြင်မိလျှင်အဆုံးထိဖတ်ပေးပြီးကျွန်တော့်ကိုအကြံဥာဏ်လေးတွေမျှဝေပေးပါ !!! ကျွန်တော်အသက်၂၀ပဲရှိသေးတဲ့SLEဝေဒနာရှင်တယောက်ပါ လားရှိုးမြို့ကပါ သားသိချင်တာတခုရှိတယ်ဗျာ့သားတို့မြို့ရဲ့လားရှိုးဆေးရုံကြီးကသမားတော်တွေပဲအဲ့လိုကွက်ဖြစ်နေတာလားမသိ ဘာရောဂါအခံရှိရှိTBဆေးတိုက်တဲ့ကိစ္စပါ ပြီးခဲ့တဲ့March 29တုံးကသားရေချိုးမှားပြီးသားအိပ်ခန်းထဲမှာတင်ကိုယ်တွေနဲနဲပူ အမေကသားကိုစိတ်မချလို့အခန်းမှာပဲရေပတ်တိုက်စောင့်ကြည့်ပေးနေရင်းနဲ့သားကအအေးပတ်ထားတော့ချောင်းအရမ်းဆိုးပြီးရင်တွေကြပ်အမောကနဲနဲဆို့သတိမေ့ပြီးဆေးရုံတင်လိုက်ရခါတိုင်းပြနေကျသမားတော်ဆေးခန်းကကပ်ဆိုးကာလမို့ဆေးခန်းပိတ်ထားတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြနေကျသမားတော်ကိုအမေကဖုန်းဆက်တော့သမားတော်ကိုယ်တိုင်ကဆေးရုံတင်ခိုင်းလိုက်တာ ဆေးရုံရောက်တော့ဘာဆေးထိုးပေးလည်းမသိ သားသတိနဲနဲလည်လာတယ် အဲ့ဒါနဲ့ဘာခံစားရလဲသူတို့မေးတာကိုသားမှာOxygenပိုက်တပ်ပြီးမောမောနဲ့ဖြေပေးတာကိုသူတို့ကစိတ်မရှည်မယုံကြည်သလိုနဲ့သားကပဲcovidကူးလာတဲ့လူနာလိုလိုဆက်ဆံ covidပိုးမြန်မာမှာစတွေ့တယ်ဆိုကတည်းကအိမ်ကလူတွေကသားကိုစိတ်မချ ခုခံအားနည်းတဲ့သူဆိုပြီး အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ကိုမထွက်ခိုင်းတာပြောပြတယ် အဲ့ဒါနဲ့သားချောင်းအရမ်းဆိုးလို့ဆိုပြီး ဓာတ်မှန်ရိုက်သလိပ်စစ်ခိုင်း သားရဲ့သလိပ်စစ်ထားတဲ့အဖြေကလည်းပိုးမတွေ့ဒါကိုTBဆေးသောက်ခိုင်း သားဘေးကလူနာတချို့လည်းသားမေးကြည့်တယ်အကိုတို့ဦးလေးတို့ချောင်းဆိုးရင်သမားတော်TBဆေးညွှန်လာဆိုအကုန်ညွှန်တယ်တဲ့ […]
အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် လူထုကျန်းမာရေးစစ်တမ်းကောက်မှု လူ ၅ သောင်းခန့်ရှိပြီ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့ လူဦးရေးအများဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မြို့နယ်မှာ မေလ ၆ ရက်နေ့ကစပြီး လူထုကျန်းမာရေးစစ်တမ်း ကောက်ယူမှု မှာ လူပေါင်း ၅ သောင်းနီးပါးရှိသွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ အင်းစိန်မြို့နယ်မှာ ရောဂါပိုးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊ တောင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အရှေ့ကြို့ကုန်းရပ်ကွက်နဲ့ အနောက်ကြို့ကုန်းရပ်ကွက်တွေကို တိုင်းအစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီ အဓိက ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ အင်းစိန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းအောင်က ပြောပါတယ်။ အခုလို COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ လူထု ကျန်းမာရေး စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအစီအစဉ်ဟာ အင်းစိန်မြို့နယ်မှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ သက်ဆိုက်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်တာလို့ အင်းစိန်မြို့နယ် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ကိုစည်သူဇော်က ပြောပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ဧပြီ ၁၈ ရက်က စတင်ထုတ်ပြန်ခဲတဲ့ ညမထွက်ရအမိန့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၂၃ […]